DHAGEYSO” Gudoomiye Yariisow Fadlan Dhalinyarada Bajaajleyda ha illaaliyaan nidaamka.. | Baahin Media
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir C/raxmaan Cumar Yariisow ayaa cambaareeyay dilkii uu sheegay in loo geysatay darawal Mooto Bajaaj iyo qofkii la socday oo ciidamada dowladda ay ku dileen Isgoyska Howlwadaag ee magaalada Muqdisho.
“Waxaan cambaareyneynaa dilka loogeystay darawalkii Bajaajka iyo shaqsigii la saarnaa. Booliiska baa ku raadjooga askarigii dilka geystay. Fadlan dhalinyarada Bajaajleyda ha illaaliyaan nidaamka oo dadka ku dhexdhuumanaya ee rabshadaha wada ha iska fogeeyaan..” ayuu yiri
Guddoomiye Yariisow Maamulka G/Banaadir ayaanay hoos tegin ciidamada amniga, tasoo keentay inuu wax badan ka qaban waayey dilalka sida joogtada ay u geystaan ciidamada dowladda. Ad Bannaabaxyo ka dhashay dilka ka dhacay Isgoyska Howlwadaag ayaa hareeyay wadooyinka u dhow Isgoyskaasi, iyadoo rasaas kale ay fureen ciidamada dowladda ay dhaliyeen qasaare kale oo dhimasho iyo dhaawac leh.
Banaan baxa rabshado watay ayaa maanta hareeyay waddooyinka Wadnaha iyo Maka Al-Mukarama, kaddib markii uu askari ka tirsan Booliska uu wiil dhalinyaro ah iyo qof la socday dil u geystay.